ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » ဆွီဒင်ခရီးသွားသတင်း » အမှုပေါင်း ၁ သန်းရှိခဲ့သည့်တိုင်ဆွီဒင်က၎င်း၏ 'COVID မဟာဗျူဟာ' တွင်ဘာမှားသွားသနည်းဟုတွေးမိသည်။
အမှုပေါင်း ၁ သန်းရှိခဲ့သည့်တိုင်ဆွီဒင်က၎င်း၏ 'COVID မဟာဗျူဟာ' တွင်ဘာမှားသွားသနည်းဟုတွေးမိသည်။
COVID-19 မှသေဆုံးသူသည်ဆွီဒင်တွင် ၁၄,၁၅၈ ဦး အထိရှိသည်
သေဆုံးသူ ဦး ရေသည်ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင်စပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်ပွားခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်အတွင်းဆွီဒင်နိုင်ငံမှလူ ၁၀၀,၀၀၀ လျှင်ရောဂါအသစ် ၆၉၁,၅၂ ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးဥရောပသမဂ္ဂတွင်အဆိုးရွားဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည် ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးဥရောပစင်တာ.
စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံသည်ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်းကူးစက်မှုအသစ် ၆,၆၂၆ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်မနေ့ကအတည်ပြုပြီးသောကူးစက်မှု ၁ သန်းရှိကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ကူးစက်ခံရသူ ဦး ရေမှာ (၁၄,၁၅၈) ဦး ဖြစ်သည်။ ဆွီဒင်တွင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုစတင်ကတည်းကမနေ့ကဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ.
ဆွီဒင်သည်ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ သို့သော်နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်သည်တစ်သန်းကျော်အထိရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ဆွီဒင်သည်အခြားနိုင်ငံများထက်ပိုမိုစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုဆွီဒင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ၏အဏုဇီဝဗေဒဌာန၏အကြီးအကဲ Karin Tegmark Wisell ကဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ကိုလျှော့တွက်ထားခြင်းနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားလေး ဦး လျှင်တစ် ဦး တွင်ပantibိပစ္စည်းရှိနေကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများနိုင်ငံသားများသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသည့်အလွယ်တကူကျရောက်ခဲ့ရသည်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီ၏အချက်အလက်များအရယနေ့အထိဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်သေဆုံးသူ ၉,၆၀၉ ဦး ကိုအသက် ၈၀ နှင့်အထက်လူများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
သေဆုံးသူ ဦး ရေသည်သူနာပြုများအိမ်များတွင်အထူးသဖြင့်ပထမလှိုင်းလုံးအတွင်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဝေဖန်သူများကပြောကြားခဲ့သည်။